SAWIRO: HABDHAQANKA IBBI IYO DIYAARADII CABUDWAAQ U SOCOTAY – Kismaayo24 News Agency
SAWIRO: HABDHAQANKA IBBI IYO DIYAARADII CABUDWAAQ U SOCOTAY
by admin 26th September 2016 072
Haddii baarlamaanka sharciga ilaalin waayo, oo shacabka xuquuqdiisa shilimaad siinayo,maxay tahay waxa ay ku sheeganayaan “Xil dowladeed!?”.
Ninkan aan calaamada geliyey waa Xildhibaan Ibi, waxaa uu saami ku leeyahay diyaarada Africa Express ee dalka ka shaqeysa. Waxaa uu saaka sameeyey wax uusan isaga aqbaleen in lagu sameeyo. Haddana iskuma heysto inuu qaldan yahay.
Saaka waxaa safar u aheyn Cabudwaaq, waxaana heysanay tikitka diyaaradaasi, markii nidaamkii kale oo dhan dhameysanay, oo kuraasta lagu sugo diyaarada fadhino ayaa waxaa yimid #IBBI isaga oo waxba inoo sheegin ayuu diyaaradii u qaatay Baydhabo, si uu Guddoomiye Jawaari usoo qaado. Hadde, ogow diyaarad dad kale u kireysan oo waliba in ay qaado un u dhiman tahay ayuu qof kale u afduubay, oo lacag kale ka qaadanayaa.
Waxa ay shaqaalihiisa inoogu sheekeynayeen diyaaradaa howl ku socotaa, waxaana uu isagii Baydhabo ka yimid 15:30 galabnimo. Taasi oo keentay in xaqiiqda loo sheego dadka ka fursan weysay. Ninkii oo aadba moodo inuusan waxba haleyn ayaa hadal inooga bilaabay:
” Diyaarada saacadan ma bixi karto, ee berri imaada, maxaa yeelay Baydhabo ayaan kusoo daahnay oo ka nimid xilligan”. Dadkii warkaasi waxa uu ku noqday af kala taag, waliba, kuweena shacabka u taagnaayeen garoonka Cabudwaaq, ee da’kasta lahaa.
Markii la weydiiyey diyaarad dad u kireysan, sidee qof kale uga kireyneysaa? Adiga oo xildhibaan sheeganayana aad shacabka ku tumatay. Waxaana uu bilaabay aflagaadeynta dadkii su’aalahaasi weydiiyey.
“Maxaa qaadi kartaan, kala taga, haddii ay dan idiin tahayna berri imaada”. Hadal xildhibaan iyo mid ganacsade midna ma ahan warkaasi uu isla mutaxay #IBBI. Waana ayaandaro weyn oo laga fileyn qof mas’uuliyad sheeganaya.
Sawirkan waa isaga oo ku dhex jira dadkii uu sida xun ula dhaqmay. Waana qeybta bixitaanka ee diyaaradaha gobollada aadaya. Aniga ayaana ka qaaday.
Mana aqaan sababta maamulka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho talaabo uga qaadi la’yihiin diyaaradaha ku xadgudbaya shacabka Soomaaliyeed, kuwa dad u jooga uga tegaya lacag darteed? Mise maamulka garoonka waxaa uu u heystaa in ammaanka garoonka kaliya laga shaqeeyo iyo lacag ka qaadashada wixii soo galaya iyo wixii ka baxaya? Aaway waajibaadkii duulimaadyada iyo dhowrista dadka socdaalka ah? .
Ma ahan markii ugu horeysay oo aan la kulmo habdhaqanka noocan ay ee shacabka lagu hayo, ee waa mid joogto u dhacda. Sida dadkii halkaasi aan wada joognay ii sheegeen. Waxaanse aniga hadda ka hor arkay diyaarad rakaab u qaadi laheyd Kismaayo, oo markii dadkii raaci lahaa diyaar noqdeen, uu lacag ku falisay danjiraha Imaaraadka ee dalkeena jooga. Halkiina looga dhaqaaqay shacab ay ugu badan yihiin waayeel iyo caruur.
Maantana isla sidii oo kale waayeel, caruur iyo xitaa odayaal dhaqan oo saameyntooda leh ayaa loola dhaqmay, si aan qurux badneyn.
#XILDHIBAAN_WAXA_UU_DHOWRI_WAAYEY_MIYAA_CID_KALE__DHOWREYSAA!? BAL ADBA!!
War Hada: Madaxweyne Xasan Shiikh oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guddoomay Danjiraha Cusub ee Jamhuuriyada…….+Sawirro
Golaha Wasiirada Galmudug oo maanta ansixiyay siyaasada Wasaarada Aminga gudaha Galmudug
Dhageyso: Madaxweynaha Galmudug oo qeylo Dhaan Xoogan u diray Beesha Caalamka iyo Dowlada Federaalka Xili ay sii Kordheyso ……
DEG DEG: Guddoomiyaha Dagmada Dayniile oo dhaawac uuka soo gaaray Isga oo …